Minisitry ny mponina Manao “télétravail” avy eny Anosiala
Elakelan-tranon’Ambanidia Misy mangalatra mivarotra hatramin’ny 7 ora hariva
Velon-taraina ny mponina eny Ambanidia izay monina eo anelakelan’ny tsena sy ny mpaompy manoloana ny afitsoky ny mpivarotra amina « Epicerie » iray eny an-toerana.
Secren Antsiranana Nalefa « congé » ny androatokon’ny mpiasa
Mihodina saingy manao « service minimum » ny orinasa Secren ao Antsiranana manomboka anio, nalefa « congé payé » ny androatokon’ny mpiasa.
Kamanja - Anjozorobe Faty mifatotra tongotra aman-tanana hita tao anaty rano
Lehilahy tokony iray, 38 taona, no hita faty tao amin’ny reniranon’i Mananara, mandalo ao atsimo andrefan’ny tanànan’Ankadivory Fokontany Kamanja, Distrika Anjozorobe.
Amborovy-Mahajanga Nahitana faty efa tena simba
Fatin-dehilahy iray, efa tena simba, no hitan’ny olona teo amin'ny morontsiraka Maroala Fokontany Amborovy, Mahajanga.
Orinasa Ambatovy Miantso vonjy ireo mpiasa mbola mihiboka
Mangataka ny mba hahafahany mivoaka sy mirihariha ety ivelany amin’izay ireo mpiasa miisa 40 mbola tavela ao amin’ny orinasa Ambatovy any Toamasina. Efa
Sabotsy Namehana Ho taterina amin’ny fiara manokana ireo mpandray “pension”
Ho fitsinjovana ireo beantitra handray ny fisotroan-drononony ao amin’ny sampana fandraisana izany ao Analamahitsy, kaominin’I Sabotsy Namehana, dia naampahafantra ny fiadidiana ity kaominina ity fa hisy ny fiara manokana amin’ny alalan’itony
Antanambao I Toamasina Mangataka ny hanalana ny sefom-pokontany ny mponina
Nitokona ny mponina tao Antanambao I Toamasina omaly. Tsy mankasitraka ny hanohizan’ny sefom-pokontany ao an-toerana ny asany intsony mantsy izy ireo.
Somary gaga ihany ireo mpanara-baovao mahita ny tale jeneraly misahana ny fiahiana sosialy misolo tena ny ministra Naharimamy Lucien Irmah isaky misy fivoriana na koa hetsika ataon` ny ministera foibe amin` izao fiatrehana ny “coronavirus” izao.
Marihana fa taorian’ny fiverenany avy namonjy fivoriana niarahana tamin’ny banky iraisam-pirenena tany Washington - Etats Unis ny alahady 15 martsa teo dia tsy afaka mivoaka ny toerana misy azy Ramatoa Minisitra raha tsy afaka 14 andro mba ho fanajana sy fanarahana ny fanapahan-kevitra noraisin’ ny fitondrana mikasika ny fivezivezena any ivelany. Araka ny fantatra dia mihiboka ao amin`ny hopitaly Anosiala Ambohidratrimo izy. Noho izany dia manao “télétravail” ity minisitra ity, izany hoe manao asa amin`ny alaln`ny aterineto toa an` ireo mpiasa maro eto an-drenivohitra. Izay fivoriana na hetsika manokana dia hahenoina hatrany ny hoe “araka ny toromarika avy amin-dRamatoa minisitry ny mponina”. Hita amin` ny pejy fesibokin` ny Minisiteran'ny mponina raha teo izany. Fotoana ilàna azy tanteraka izao fiatrehana ny COVID-19 izao eto Madagasikara kanefa izy moa tsy ao. Hita avokoa moa ireo ministra sasany manao ny asan` ny hafa satria tsy voakasika amin` izany ny minstera sahaniny. Ny ministry ny tontolo iainana ohatra dia nanentana hatrany ny teo amin`ny fanadiovana tanana na dia tsy misy hifandraisana amin` ny sampandraharaha sahaniny izany. Toy izany koa ny ministry ny harena an-kibon` ny tany, izay nanome ireo toromarika manoloana ny fitaterana. Raha tsiahivina, ny Minisitry ny Mponina Naharimamy Lucien Irmah dia nitarika ny delegasiona Malagasy amin’ny fihaonana miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena natao aty Washington – Etazonia nanomboka ny 9 martsa 2020 teo. Fihaonana nitadiavana fanatsarana sy fanampiana ny fiahiana ara-tsosialin’ny mponina indrindra ny vehivavy eto Madagasikara.